Akụkọ - Pịgharịa Compressor Units VS screw Compressor Units VS piston Compressor Units
Pịgharịa ngalaba Compressor
Ụkpụrụ:Ụdị ahịrị akwụkwọ mpịakọta nke efere na-akpụ akpụ na efere static bụ otu, mana ọdịiche nke oge bụ 180∘ ka ntupu na-etolite usoro nke oghere mechiri emechi;efere static anaghị agagharị, na efere na-agagharị agagharị na-agagharị n'etiti etiti efere ahụ na eccentricity dị ka radius.Mgbe diski na-akpụ akpụ na-emegharị, ọ na-emegharị ya n'usoro, nke mere na mpaghara nke yiri mgbawa na-aga n'ihu na-ejikọta ma belata, nke mere na gas na-anọgide na-ejikọta na n'ikpeazụ na-esi na etiti oghere nke diski static.
Nhazi:diski na-akpụ akpụ (vortex rotor), diski static (vortex stator), bracket, cross njikọ mgbanaka, oghere nrụgide azụ, oghere eccentric
1. Oghere eccentric na-anya akwụkwọ mpịakọta na-akpụ akpụ nwere ike ịtụgharị na oke ọsọ ọsọ, na mpịakọta mpịakọta dị ntakịrị na nha na ìhè dị arọ;
2. Mgbanwe ike nke akụkụ ndị na-akpụ akpụ dị ka akwụkwọ mpịakọta na-ebugharị na ogwe isi dị ntakịrị, na ịma jijiji nke igwe dum dị ntakịrị;
3. Ọ dabara maka mgbanwe ọsọ ọsọ na teknụzụ mgbanwe ọsọ ọsọ ọsọ;
4. Mpempe akwụkwọ mpịakọta dum nwere mkpọtụ dị ala;
5. Mpempe akwụkwọ mpịakọta ahụ nwere nkwụsị nke a pụrụ ịdabere na ya ma dị irè, yana ọnụọgụ refrigeration anaghị ebelata na mmụba nke oge ọrụ, mana ọ na-abawanye ntakịrị.
6. Mpempe akwụkwọ mpịakọta nwere njirimara ọrụ dị mma.N'ime usoro ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, a na-egosipụta ya karịsịa na arụmọrụ ọkụ dị elu, nkwụsi ike dị mma, na nchekwa dị elu;
7. Mpempe akwụkwọ mpịakọta enweghị ụda mkpochapụ ma nwee ike ịnọgide na-arụ ọrụ arụmọrụ dị elu;
8. Mgbanwe nke torque dị ntakịrị, nguzozi dị elu, vibration dị ntakịrị, na ọrụ ahụ kwụsiri ike, nke mere na ọrụ ahụ dị mfe ma dị mfe ịghọta akpaaka;
9.Akụkụ ole na ole na-akpụ akpụ, enweghị usoro ntụgharị, usoro dị mfe, obere nha, ịdị arọ dị arọ, akụkụ ole na ole, ntụkwasị obi dị elu, na ogologo ndụ nke ihe karịrị afọ 20.
SNdị ọrụ Compressor Units
Ụkpụrụ:Site na nmikpu ọnụ nke Yin na Yang rotors na mmegharị ahụ na-aga n'ihu nke ahịrị kọntaktị oghere site na njedebe mmiri ruo na njedebe iyuzucha, a na-agbanwe olu nke oge ochie site n'oge ruo n'oge, si otú a na-emecha usoro mmịpụta na ikpochapụ na-aga n'ihu.
Nhazi:Ihe mejupụtara casing, skru (ma ọ bụ rotor), ibu, ngwaọrụ mgbanwe ike, wdg.
1. Akụkụ ole na ole, obere ihe na-eyi uwe na ntụkwasị obi dị elu;
2. Ọrụ dị mma na mmezi;
3. Enweghị ike inertial na-enweghị atụ.Ọrụ dị nro ma dị mma, obere mkpọtụ;
4. O nwere njirimara nke nnyefe ikuku na-amanye, ihe nkwụsị nke ntanye na-adịghị emetụta ya, na ọnọdụ ọrụ na-agbanwe agbanwe;
5. The rotor eze elu nke ịghasa compressor n'ezie nwere oghere.Ya mere, ọ naghị emetụta ọrịa strok mmiri ma nwee ike iguzogide ujo mmiri mmiri;
6. Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ dị ala, ọ pụkwara ịrụ ọrụ n'okpuru oke nrụgide dị elu;
7. Ọ nwere ike na-aghọta stepless ukpụhọde nke refrigeration ọnọdụ, n'ịkwenye a slide valvụ usoro, nke mere na refrigeration ikike nwere ike steplessly gbanwee si 15% ka 100%, na-azọpụta ọrụ ụgwọ;
8. Ọ dị mfe ịghọta akpaaka na ike ịghọta n'ime obodo nkwurịta okwu.
Piston Compressor nkeji
Ụkpụrụ:Ịdabere na mmegharị mmegharị nke piston iji mpikota gas na cylinder ahụ.Ọtụtụ mgbe, a na-atụgharị ntụgharị nke onye na-ebugharị isi ka ọ bụrụ mmegharị mmegharị nke piston site na usoro mkpanaka njikọ crank.Enwere ike kewaa ọrụ nke crankshaft na-eme maka mgbanwe ọ bụla n'ime usoro oriri na mkpakọ iyuzucha usoro.
Nhazi:Gụnyere ahụ, crankshaft, mgbakọ mkpanaka njikọ, mgbakọ piston, valvụ ikuku na mgbakọ cylinder liner, wdg.
1. N'ọtụtụ nrụgide n'ozuzu, ihe ndị a chọrọ maka ihe dị ala, a na-ejikarị ígwè ígwè nkịtị eme ihe, nke dị mfe nhazi na ọnụ ala;
2. The thermal arụmọrụ dịtụ elu.N'ozuzu, na adiabatic arụmọrụ nke nnukwu na ọkara-sized nkeji nwere ike iru banyere 0.7 ~ 0.85;
3. Ịdị njọ na njirimara nke gas na-enwe mmetụta dị nta na arụmọrụ nke compressor, na otu compressor nwere ike iji dị iche iche gas;
4. The piston compressor bụ dịtụ tozuru okè na nkà na ụzụ, na-akwakọba ọgaranya ahụmahụ na mmepụta na ojiji;
5. Mgbe a na-emezi ụda ikuku, ihe ngbanwe ahụ siri ike, ya bụ, nkwụsị nke ikuku dị obosara, ma ọ dịghị emetụta ọkwa nrụgide, ma nwee ike ime mgbanwe n'ọtụtụ nrụgide na ike jụrụ oyi.